လူသားများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်မရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ ကို သင်သိပြီးပြီလား - Mega Wave
ဟိမဝန္တာတောင်အတွင်းမှာ မန္ဒာဂီရိအမည်ရှိတဲ့ တောင်မှာ မဟေသရအမည်ရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးသော နတ်တစ်ပါးရှိတယ်။ အခါတစ်ပါး ဘုရားရှင်သည် ဟိမဝန္တာအရပ် နံ့သာတောကြွပြီး နေ့သန့်သတဲ့၊ ဒီအခါ မဟေသရနတ်မင်းက လာရောက်ပြီး ဘုရားရှင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် ကစားလိုပါတယ်လို့လျှောက်သတဲ့။ဒီအခါ ဘုရားရှင်က ဒီနတ်ဘီလူးဟာ တန်ခိုးကြီးသူဖြစ်တယ်။
ဒီအခါ မဟေသရက အမှန်မှာ ရှင်ကြီးဂေါတမဟာ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲ ရမ်းပြောတာ ဖြစ်မယ်လို့ အကြံဖြစ်ပြီး မထဘဲ နေသေးသတဲ့၊ဒီအခါဘုရားရှင်က အချင်း မဟေသရ ဒီလိုမကြံနှင့်၊ ငါဟာ သင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုမျှမက ဝမ်းတွင်းက အူခွေများထိအောင် မြင်တယ်လို့ မိန့်တော်မူမှ ပုန်းရာက ထပြီး အရှင်ဂေါတမ အရှင်ဟာ အမှန်တကယ် တန်ခိုးကြီးပါတယ်၊
မဟေသရနတ်လည်း မျက်နှာကိုဖွင့်၊ ထက်ဝန်းကျင်ကြည့်သော်လည်း ဘုရားရှင်ကို မမြင်ဘူးတဲ့၊ ဒါကြောင့် ရေမြေတောတောင် သမုဒ္ဒရာမကျန်အောင် ဘယ်လိုရှာဖွေလို့မျှ မတွေ့တော့မှ ဘုရားရှင်ကို ပန်းပေးရသတဲ့၊ အဲဒီအခါမှ ဘုရားရှင်က မဟေသရနတ်မင်းရဲ့ မျက်မှောက်အကြားက ဆင်းသက်တော်မူလာသတဲ့။
ထိုကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်ကို ဖန်းဆင်းတယ်။ ဂန္ဓကုဋီတိုက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်တို့ဖြင့် တင့်တယ်တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်တုတော်ကို ပြုလုပ်ပြီး မျောက်မင်းတစ်ကောင်ကို အခြံအရံနှင့်တကွ ကျောင်းပရိဘောဂကို ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အပ်နှံထားသတဲ့။ ဒါက မဟေသရစေတီတော်ပါ။
← သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေနိုင်တဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး
တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် ဘာလို့ ထမင်းကို ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာကိုပဲ ထည့်စားပါသလဲ…? →
မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါးတတ်ချိန်တွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ဖို့
သင့်​အသက်​ ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ . . .